I-Luxury Apartment enePool kufuphi neCandolim - I-Airbnb
I-Luxury Apartment enePool kufuphi neCandolim
Le ndlu inesitayile kulapho ufuna ukuhlala khona ukuba ujonge ukuchitha ixesha elisemgangathweni nomntu wakho okhethekileyo okanye usapho. Ipropathi nayo inequla lokuqubha.
Fumana ukuhlala okutofotofo kule ndlu ibekwe eSaipem ekwindlela eya eCandolim naseCalangute.
Sinabasebenzi abaqeqeshiweyo kwipropathi ukukunceda ngokuhlala kwakho xa ufuna inkonzo.
Le yindlu eyi-1 BHK emiswe kwindlela eya eCandolim. ICandolim yenye yezona ndawo zidumileyo zabakhenkethi eGoa. Zonke iindawo ezidumileyo zobomi basebusuku ezifana neTito's, Mambos, cafe yaseKapa, iindawo zokutya ezifana ne-Infantaria, iSouza Lobo, iFat Panda, iTyotyombe kunxweme lwaseCalangute zikufutshane kakhulu kule Villa. Phantse ngaphantsi kwe-5 Kms kude.
★ I-air conditioner kwigumbi lokulala
★ ukufikelela kwidama lokuqubha
★ Sofa Cum Ibhedi
Le ndlu igcinwe kakuhle kunye nebhedi ekhululekile kwigumbi lokulala. Siphinde sibe nebhedi ye-sofa cum kwindawo yokuhlala. Kukho igumbi lokuhlambela langoku elinamanzi ashushu nabandayo.
Kukho indawo yokuqubha ebekwe kule ndawo.
Uya kuyixabisa indawo oya kuba nayo ngelixa uhlala kule ndlu.
Nceda ucofe ku-*Qhagamshelana noMmkeli* phambi kokuba ubhukishe ukuba unawo nawaphi na amathandabuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo. Yithi "Hi" kum nokuba awufuni ukubhukisha ukuze ndibone ukuba ubunomdla kwipropathi yam
Ukugcina isiseko selali yaseGoan yakudala, i-villa ijikelezwe yimithi eluhlaza eluhlaza, iicawe, iindawo zokutyela ezidumileyo, iindawo zokutyela ezifana neNdlu yeLlyods, iiklabhu zasebusuku ezifana ne-LPK kwaye ikufuphi nolwandle lwaseCandolim (i-10 ukuya kwi-15 imizuzu yokuqhuba) kunye neCoco Beach.
Ndihlala ndifumaneka kwifowuni okanye kwincoko. Cofa ku-"contact host" ukhetho ukuba unayo nayiphi na into onokuyibuza ngaphambi kokuba ubhukishe. Ndiza kuzama ukukunceda ngako konke endinako ngexesha lokuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Marra